‘म सुन्दर, सफा, हराभरा र पर्यटकलाई लोभ्याउने काठमाडौं बनाउँछु’ | नयाँ शक्ति नेपाल
- २४ बैशाख, २०७४
उम्मेदवार प्रमुख, काठमाडाैं महानगरपालिका ।
२०१५ सालमा काठमाडौंका न्यूरोडमा जन्मिएका पवित्र बज्राचार्यले त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ । काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं. २३ का बासिन्दा बज्राचार्य सानैदेखि समाजसेवामा रुचि राख्नुहुन्थ्यो । स्थानीय रुपमा क्रियाशील सामाजिक संस्था तथा क्लवहरुमा आवद्ध भई शिक्षा, सामाजिक चेतना, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा निकै योगदान दिनुभएका बज्राचार्यले विगत १५ वर्ष काठमाडौं महानगरको वडा नं. २३ को वडा अध्यक्ष र केही समय कार्यवाहक मेयरको रुपमा काम गर्नुभयो । हाल उहाँ नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख पदको उम्मेदवार हुनुभएको छ । उहाँसँग निर्वाचनकै सेरोफेरोमा रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईंको अहिले काठमाडौंको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ, तपाईंको अलिकति सामाजिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न ।
म काठमाडौंमै जन्में, हुर्कें र यहिं क्रियाशील भएर काम गरें । सानैदेखि समाजसेवामा सक्रिय मैले टोलमा रहेका विभिन्न सामाजिक संस्थाहरुमा सक्रिय भएर काम गरें । २०३८ सालमा पहिलोपटक नगरपालिकाको नगर सभासद्का रुपमा निर्वाचित भएँ । त्यसको पाँच वर्षपछि भएको स्थानीय निकायको चुनावमा वडाअध्यक्षमा निर्वाचित भएँ । २०४६ सालको आन्दोलन सुरु हुनु भन्दा पहिले बहुदलको पक्षमा लागेको भन्ने आरोपमा तत्कालीन सरकारले निलम्बन पनि ग¥यो । ०४६ सालको परिवर्तन पश्चात् भएको स्थानीय निकायको चुनावमा पनि म पुनः वडाअध्यक्षका रुपमा निर्वाचित भएँ । मेरो काम गर्ने शैली अरुको भन्दा फरक भएको कारण मैले १५ वर्ष वडाअध्यक्षकै रुपमा काम गर्ने मौका पाएँ ।
त्यही क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यवाहक मेयर भएर पनि केही समय काम गर्ने मौका पाएँ । त्यही अवसरमा मैले विदेशका समृद्ध देशहरु र त्यहाँका समृद्ध र व्यवस्थित बसोबास भएका सहरहरुको अध्ययन भ्रमण गर्ने अवसर पनि पाएँ । म्यान्चेष्टरको वल्ड ह्याबिट्वाब टू नामक अन्तर्रष्ट्रिय सम्मेलनमा, स्टाम्वुलको वल्र्ड ह्याविट्याब टू को सम्मेलनमा पनि भाग लिन पाएँ । वडा अध्यक्ष भएर नै मैले जापान, मलेशिया, सिंगापुर जस्ता देशहरु जाने मौका पाएँ । त्यहाँको विकासले मन छोयो र त्यहाँको जस्तै विकास गर्ने इच्छा भएर आयो । अनि म सामाजिक कामतिरै अग्रसर हुन थालेँ । ओलम्बस क्लबको अध्यक्ष भएँ, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको संथापक कोषाध्यक्ष भएर पनि काम गरेँ । अहिले पनि नेपाल खुद्रा व्यापार संघको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएर तेस्रो कार्यकाल चलाइरहेको छु । साथै विगत लामोसमयदेखि जनजाति आन्दोलनमा पनि सक्रिय भएर काम गरेको छु । समाजसेवाको मेरो लगावका कारण म धेरै सामाजिक संस्थाहरुमा आवद्ध हुँदै आइरहेको छु ।
तपाईंलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्न के कुराले प्रेरित ग¥यो ?
अहिले हामी काठमाडौंवासीहरुले धेरै समस्याहरु भोगिरहेका छौं । धुलोधुँवा, हिलोमैलो, ट्राफिक जाम, खानेपानीको समस्या, वायु प्रदुषणलगायतका समस्याहरु आम भएका छन् । हाम्रा चाहाना धेरै छन् तर यस्ता सामान्य कुराहरुले नै हामीलाई पिरोलिराखेको छ । यसर्थ, रचनात्मक सोँच र चिन्तनको विकास गर्न सबैभन्दा पहिले यी सामान्य समस्याहरुबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यदि नेतृत्वले चाहने हो भने यी समस्या त्यति ठूला होइनन्, तुरुन्तै हल हुन सक्छन् । यसलाई नेतृत्वले चासो नदिएका कारण नै हामीले यी समस्याहरु भोगिरहेका छौँ । सीप, ज्ञान, क्षमता योग्यता हुँदाहुँदै पनि युवा जनशक्ति बेरोजगार छ । देशभित्रै रोजगारीका बाटाहरु खोज्न सकिन्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि अहिलेको नेतृत्वले त्यसमा चासो देखाएको छैन ।
काठमाडौंको ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाहरुका कारण पर्यटकहरु नेपाल घुम्न आउँछन् । तर, पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने विभिन्न विकासका पूर्वाधारहरुको विकास अझै भएको छैन । जसका कारण लामो समयसम्म घुम्न आउने पर्यटकहरु छोटो समयमानै फर्केर जाने गरेका छन् । पर्यटकहरुलाई लामो समयसम्म नेपालमा नै बस्ने वातावरण बनाउन सके धेरै युवाले रोजगार पाउने थिए । यहाँको आधुनिक विकास, समृद्ध सहरको निर्माण अनि स्वच्छ, सफा र हराभरा काठमाडौं अनि आम रुपमा बस्न लायकको सहर बनाउने सपनाले नै म यहाँको नेतृत्वमा आउन खोजेको हो ।
तपाईं यहिं जन्मनुभयो, हुर्किनुभयो र सामाजिक रुपले पनि सक्रिय रहनुभएको छ । हिजो तपाईँ हुर्केको काठमाडौ र आजको काठमाडौँमा कस्तो परिवर्तन पाउनु भएको छ ?
म सानो हुँदा काठमाडौ शान्त, सफा र प्रदुषणरहित थियो । यहाँका नदी पोखरीमा नुहाउन सकिन्थ्यो । चोक चोकमा रहेका इनारमा प्रशस्त पानी पाइन्थ्यो । नदी, पोखरीहरुमा माछा लगायतका विभिन्न जलप्राणीहरु देख्न पाइन्थ्यो । मठ मन्दिरहरु सफा थिए । वातावरण सफा थियो । दूर्घटना हुने वातावरण थिएन । कोलाहल भीड पनि थिएन । यहाँका बाटो तथा गल्लीहरुमा खेल्न सकिन्थ्यो ।
देशको राजधानी भएका कारण जसरी शहरीकरण बढ्दै गयो जनघनत्व बढ्दै गयो । तर, त्यसको तुलनामा नीति नियम र मापदण्ड अनि पूर्वाधारको विकास भएन । यदि यहाँका शासकहरुले त्यसो गरिदिएको भए आज जस्तो अस्तव्यस्त सहर हामीले भोग्नुपर्ने थिएन होला । विश्वमा कैयौँ ठूला सहरहरु छन् । ती सबै व्यस्थित छन् । उनीहरुले नगर कसरी बसाउने कुन ठाउँमा बाटो बनाउने, कुन ठाउँमा साँस्कृतिक धरोहर बनाउने जस्ता कुराहरु पहिले नै योजनागत रुपमा लागू गर्ने गरेका कारण ती सहरहरु व्यवस्थित छन् । तर हाम्रो सवालमा त्यस्तो भएन । जथाभावी बस्ती बसाउने गर्नाले आज यो अवस्था आएको हो ।
म आफैं काठमाडौंलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गएर बस्न लायकको सहर कसरी बनाउने भन्ने बारेमा तालिम लिएर आएको व्यक्ति पनि हुँ । त्यसैले म यहाँको वर्तमान अवस्था देख्दा अत्यन्तै चिन्तित र अन्योलमा छु । जुन गल्ती पहिलेकाले गरे तर अबको नेतृत्वले व्यवस्थित सहर कसरी बनाउने भन्न बारेमा योजनागत कामहरु अगाडि बढाउन आवश्यक छ । त्यही काम पूरा गर्न म नेतृत्वमा आउन खोजेको हुँ ।
तपाईंले पहिचान गरेको काठमाडौका मुख्य पाँचवटा समस्याहरु के के हुन् ?
काठमाडौको मुख्य समस्या भनेको धूलोधूँवा र प्रदूषण नै मुख्य हो । त्यसपछि खाल्डाखुल्डी परेको सडक, भूकम्पले भत्काएका पुरातात्विक धरोहरहरु तथा आवासयुक्त घरहरुको पुन निर्माण हुन नसक्नु । खानेपानीको समस्या, व्यवस्थित मोटर पार्किङको र फोहोरमैला व्यवस्थापन हुन नसक्नु नै यहाँका मुख्य समस्याहरु हुन् । त्यसपछि अव्यवस्थित सहरिकरण लगायतका अरु थुप्रै समस्याहरु विद्यमान छन् ।
तपाईंले पहिचान गर्नुभएका समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधानका लागि उपयुक्त रणनीति के हुनसक्छ ?
धूलो धूँवा आउनुको मूल कारण के हो ? त्यसको पहिचान गरेर समाधानतर्फ लाग्न आवश्यक छ । नेपाल सरकारले गाडी चलाउन ‘युरो टू’ भनेर मापदण्ड तोकेको छ । त्यो मापदण्डभित्र नरहेका मोटरहरुलाई हटाउन सक्नुप¥यो । बाटो निर्माणका क्रमम बाटो छेउमा छोडिएका खाली ठाउँबाट नै धूलो आउने गर्छ र ती खाली ठाउँमा पिच गर्नुप¥यो । बाटो विस्तारका क्रममा भत्काइएको घरहरुबाट निस्कने फोहोरलाई तुरुन्त व्यवस्थापन गर्न सके धूलोको समस्यमा कमी आउने थियो ।
अब शायद मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा वितरण सुरु भएपछि यहाँको खानेपानीको समस्या पक्कै पनि केही हल हुन्छ । मेलम्चीको पानी नआउँदासम्म सर्वसाधारणका लागि चोक चोकमा ट्याङकरबाट पानी वितरण गर्नुपर्छ । नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका आयोजनाबाट पानीको पूर्ति गरिएका कारण उपभोक्ताले महंगो शुल्कमा पानीको उपभोग गरिरहेका छन् । फोहोर मैलाको व्यवस्थापन सबैभन्दा सजिलो रुपमा गर्न सकिन्छ । विदेशका विकसित सहरहरुमा रातको समयमा फोहोर उठाउने चलन हुन्छ । मैले स्टानबुलमा त्यही देखेँ । त्यो व्यवस्था हाम्रोमा पनि गरौँ भनेर मैले महानगरपालिकामा क्रियाशील हुँदा कुरा उठाएको थिएँ । पछि फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको जिम्मा मलाई नै दिइयो अनि मैले त्यो जिम्मा पाएपछि फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर विदेशमा सिकेर आएको योजना लागू गरी मैले करिब ४ महिना काम गरेँ । त्यो बेला काठमाडौं सफा पनि भएको थियो । विदेशी पर्यटकहरुले पनि आजभन्दा अगाडि कहिल्यै पनि यति सफा थिएन भनि प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
तर, दुःखको कुरा त्यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेन । बिचैमा त्यो कार्यक्रम राकियो । त्यो रोकिनुको कारण केही कर्मचारीहरुको गलत बुझाइ थियो, माफिया तन्त्र चलाएर बसेका केही कर्मचारीहरुले फोहोर उठाउने नाउँमा कमिसन खान नपाएका कारण त्यो कार्यक्रम बिचैमा रोकेर पुरानै कार्यक्रम चलाए । तर, फोहोर व्यवस्थापनको लागि फेरि पनि हामीले त्यो कार्यक्रम चलाउन सक्छौं ।
काठमाडौं महानगरमा २ लाख ८४ हजार मतदाता छन्, ती मतदातासमक्ष भोट माग्न कसरी पुग्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
हामी उम्मेद्वारहरु सम्पूण मतदाताकोमा पुग्ने सम्भवना छैन । तर, त्यसको विकल्पहरु हामीले देखेका छौँ । अहिलेका मतदाताहरुमा धेरै युवाहरु छन् । अब उनीहरुको घर घरमा होइन हातहातमा पुग्ने मैले योजनाहरु बनाएको छु । फेसबुकको माध्यमबाट भोट माग्ने वातावरण मैले बनाएको छु । अन्य मतदाताकोमा पुग्ने माध्यम भनेको पत्रपत्रिका, रेडियो टेलिभिजन तथा अनलाईन संचारका माध्यमहरु नै हुन् । ती सबै मार्फत हामी मतदाताकोमा पुग्नेछौं ।
तपाईलाई काठमाडौंका मतदाताले किन भोट दिने ? तपाईंलाई जिताउनुपर्ने कारणहरु के के हुन् ?
अहिलेका ठूला पार्टीहरुले काठमाडौलाई स्मार्ट सीटि बनाइदिन्छु, सिङगापुर बनाइदिन्छु भन्ने खालका सपना बाँड्ने गरेका छन् । त्यस्ता सपनाको खेती गर्ने मानिसहरु अझै पनि हाम्रो महानगरपालिकामा रहेका छन् । उनीहरुले काठमाडौंका जनतामा परिवर्तनको आभाष हुन दिएनन् । पहिले जसरी चलिरहेको छ त्यसैलाई चलाईरहेका छन् । तीनै नेतृत्व आउने हो भने काठमाडौँका जनताले विकासको आभास गर्न पाउने छैनन् । मतदाताले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नेबेला आएको छ । मैले विगतमा समाजका लागि जुन प्रकारको योग्दान गरेँ, त्यसको मूल्याङकन गर्दा मलाई नै भोट दिन उपयुक्त हुन्छ र जनताले पनि मलाई नै भोट दिने कुरामा म पूर्ण रुपमा आशावादी र विश्वस्त छु ।
काठमाडौंको मेयरमा निर्वाचित हुनुभयो भने के के गर्नुहुन्छ ?
यदि म निर्वाचित भएँ भने सर्वप्रथम काठमाडौमा रहेका बुद्धिजीविहरुको सल्लहाकार समिति वनाउने छु, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको पनि टिम बनाउने र युवाहरुको पनि एउटा टिम बनाउने छु । किनभने विज्ञहरुको अनुभव र युवाको जोशको प्रयोग गरेर सुन्दर काठमाडौँ बनाउन सकिन्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।
तपाईंले कस्तो काठमाडांैको परिकल्पना गर्नुभएको छ ?
बाटोमा हिंड्दा मास्क लगाएर हिंड्न नपर्ने काठमाडौँ । पार्किङले अस्तव्यस्त नभएको काठमाडौं । बस्न लायक सहर काठमाडौं । सुन्दर, सफा, हराभरा र पर्यटकलाई लोभ्याउने काठमाडौं । र, युवाको विदेश पलायन रोकी काठमाडौँमा नै पर्याप्त रोजगारसहित जीवन चलाउन सक्ने काठमाडौं मैले परिकल्पना गरेको काठमाडौं हो । म त्यही काठमाडौं बनाउने दिशामा लागिपर्नेछु ।